Dropbox သည် OS X 10.5 နှင့်နောက်ဆက်တွဲအထောက်အပံ့များကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် ငါက Mac ပါ
Dropbox သည် OS X 10.5 နှင့်ထိုထက်စောသောဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုတော့ပါ
Jordi Gimenez | | Mac OS X ကို, OS X နှင်းကျားသစ်
Dropbox သည် OS X 10.6 Snow Leopard ဗားရှင်းအဟောင်းများရှိသူတို့၏စက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် Mac အသုံးပြုသူများအားအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်သည် လာမည့်မေလ 18 မှ Cloud application အတွက်အထောက်အပံ့နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသူတို့ရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကသူတို့ဒေတာအားလုံးဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပါသလား မွမ်းမံခြင်းမပြုပါကကျွန်ုပ်တို့ Dropbox ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဟုသင်ပြောနေသလား။ developer အားလုံးသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသောအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Dropbox application မှကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာနှင့်အခြားအရာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ အမြဲတမ်းဝဘ်ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်.
သိုလှောင်မှုကုမ္ပဏီသည်ဤအီးမေးလ်ဖြင့်လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်သွယ်သည် မကြာခင်ရောက်လာလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်သည် OS X 10.5 သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းလျှင်အသုံးပြုသည်ဆိုလျှင် -
သငျသညျအဟောင်းကို operating system ကို (OS X Tiger 10.4 သို့မဟုတ် OS X Leopard 10.5) တွင် Dropbox desktop application ကိုအသုံးပြုနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ Dropbox သည် OS X ၏မူကွဲများကိုထောက်ခံတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့သည်။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်၏ဖိုင်များနှင့်ဓာတ်ပုံများဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သည် Dropbox desktop application မှဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်၍ ရယူလိုပါက OS X Snow Leopard 10.6 နှင့်အထက်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ အက်ပဲလ်ရဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုမွမ်းမံနည်းလမ်းညွှန်ကိုတွေ့နိုင်တယ် ဒီမှာ.
သင်၏ operating system ကို OS X 10.6 သို့မဟုတ်အထက်သို့မွမ်းမံလိုပါကဖိုင်များသည် ဆက်လက်၍ ရရှိနိုင်လိမ့်မည် Dropbox ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့သော်မေလ ၁၈ ရက်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ Dropbox အက်ပ်ကိုလက်လှမ်းမမှီတော့ပါ။
အဆင်မပြေမှုအတွက်တောင်းပန်ပါတယ် ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ အကူအညီစင်တာ .
- Dropbox အသင်း
ထို့ကြောင့်သင်သတိပေးခြင်းကိုခံရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဖိုင်များကိုစီမံရန် Dropbox အက်ပလီကေးရှင်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါက OS X ကိုမွမ်းမံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ လုံးဝပုံမှန်ပါပဲ developer များက OS X ၏မူကွဲဟောင်းများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X နှင်းကျားသစ် » Dropbox သည် OS X 10.5 နှင့်ထိုထက်စောသောဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုတော့ပါ
ငါ့ကို Dropbox က OS X 10.5 နဲ့နောက်ပိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ငါ့ကိုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မိတယ်။
အားလုံးညာဘက် corleonemike !! ဘာမှားနေတာလဲ !! 🙁
ပုံမှန်ပုံမှန် ... သူတို့ကဒီ application ကိုအလုပ်လုပ်စေနိုင်ပေမယ့်အသစ်ထွက်တဲ့ version တွေဟာ version 10.5 နဲ့နိမ့်ကျတယ်၊ ဒါကလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ ...
ကောင်းပြီ OS x El Capitan နဲ့ဆိုရင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
South Twelve South သည် MacBook၊ ParcSlope အတွက်ရပ်တည်သည်
MacID မှ ကျေးဇူးတင်၍ သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad နှင့်သင်၏ Mac ကိုသော့ဖွင့်ပါ